Umkhiqizi womatilasi ongewona owonase entwasahlobo | Rayson
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile futhi esheshayo, iRayyson ikhule yaba yinye yamabhizinisi anobungcweti kakhulu futhi anethonya eChina. Ama-matress asentwasahlobo namuhla, amaRayson abeka phezulu njengomhlinzeki ochwepheshe futhi onolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungathola okuningi ngomkhiqizo wethu omusha ongewona umkhiqizi wentwasahlobo kanye nenkampani yethu ngokuxhumana ngqo nathi.Umkhiqizo unobungani besikhumba. Izindwangu zalo kufaka phakathi ukotini, uboya, i-polyester, kanye ne-spandex konke kuphathwe ngamakhemikhali ukuze kube nezinto eziyingozi.